देउवाको बोलि नबुझिएको भन्दै राष्ट्रपतिले गरिन् भद्धा मजाक, आखिर किन देउवाको बोलि बुझिदैन ? यस्तो छ उनको हृदयविदारक कथा::Point Nepal
देउवाको बोलि नबुझिएको भन्दै राष्ट्रपतिले गरिन् भद्धा मजाक, आखिर किन देउवाको बोलि बुझिदैन ? यस्तो छ उनको हृदयविदारक कथा
काठमाडौं, ७ असोज । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको बोलि नबुझिएको भन्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले कमेन्ट गरेपछि अहिले चौतर्फी यसको विरोध गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कमेन्ट देउवामाथि भएको भद्धा मजाक भएको विश्लेषण गर्दै यसको विरोध गरिएको हो । शारिरिक कमजोरीमा व्यंग्य गर्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ । हो, सभापति देउवाको बोली सहजै बुझिँदैन । तर, पनि राष्ट्रपतिले उनको त्यो कमजोरीलाई मजाकको विषय बनाउँन मिल्दैन, धेरैले यस्तै भनेका छन् ।
आखिर देउवाको बोली किन यस्तो भयो, त्यो राष्ट्रपतिले बुझन् जरूरी छ । पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनकामा पाएको यातनाका कारण देउवाको बोली यस्तो भएको राष्ट्रपतिले बझिनन् वा उनलाई थाह छैन । तर, पुराना कांग्रेस नेता भरतप्रसाद उप्रेतीले ‘साझा पोस्ट’ नामक न्यूज पोर्टलमा लेख लेख्दै देउवाको बोली बारेमा खुलसा गरेका छन् ।
के भएको रहेछ ? (उप्रेतीकै शव्दमा)
प्रयागराज काँग्रेस छाडेर पञ्चायतमा गएका थिए । अरु पनि जालान् भनेर रोक्न बम हानेको । प्रयागराज मेरो बाल्यकालदेखिको साथी । ००७ सालदेखिको । एउटै दिदीले टिका लगाएको ।
(उप्रेतीको यो भनाई साझा पोस्टले कुराकानी आधारित बनाएको लेखबाट लिइएको हो ।)